Alatsinainy, Jolay 17, 2017 Alahady, Jona 10, 2018 Douglas Karr
Na eo aza ny fiakaran'ny fampiasana finday, tranokala maro no manome traikefa mahantra amin'ny finday, manery ny mpanjifa mety hiala eo amin'ny toerana. Ireo tompon'orinasa izay vao avy nianatra namakivaky ny sehatry ny birao dia mahita fa sarotra ny manao ny tetezamita mankany amin'ny finday. Ny fahitana ny tena hatsarana tsara dia mety ho olana. Ny tompona orinasa dia mila miasa mafy hahatakatra ny tanjon'ny mpihaino azy ary hanangana ny endriny sy ny endriny manodidina ny personas an'ny mpividy. Mora kokoa hoy hatrany ny fitalahoana amin'ireo mety ho mpanjifa
Mipoaka ny indostrian'ny infografika ary mahita fitaovana vaovao manampy isika izao. Amin'izao fotoana izao, ny maso ivoho infografika dia mitaky $ 2k ka hatramin'ny $ 5k mba hikarohana, hamolavola ary hampiroborobo infographic mahafinaritra. Ireo fitaovana ireo dia hahatonga ny fampiroboroboana ny infografikao tsy dia lafo loatra, ho mora kokoa ny famolavolana sy ny famoahana azy, ary ny sasany dia ahitana ny modely fanaovana tatitra mba hahitana hoe hatraiza ny fanaparitahana sy fampiroboroboana ny infografikao. Ny sasany amin'izy ireo dia somary tanora ka mety mila miatrika